Kule veki kwi-GNOME siqhubela phambili iindaba kwidesktop edumileyo | Ubunlog
IPablinux | 11/09/2021 11:15 | Ukuhlaziywa ukuba 11/09/2021 11:17 | gnome, Ubuntu
Kwixesha elidlulileyo sipapashe iposti entsha malunga nento entsha kwi KDE. Iprojekthi ye-K iqhubeke ixesha elide, nangona ekuqaleni yayilinyathelo lokuphucula izinto ezibizwa ngokuba yi-KDE Usability kunye neMveliso. Njengoko bebona ukuba baqhuba kakuhle kwaye inomdla, ngoku ibizwa ngokuba yile Veki kwi KDE. Andazi kakuhle ukuba bebesekwe phi okanye kutheni bayenzile, kodwa iinyanga ezimbalwa ikhutshiwe Kule veki kwi-GNOME.
Ukunyaniseka, i inombolo yokungena 9 Ayisiyo eyokuqala ndiyibonayo ngeli nyathelo, kodwa ngenxa yesizathu esithile ndicinge ukuba yayingeyonto ekufuneka ithathelwe ingqalelo. Mhlawumbi ngenxa yokuba ndingaphezulu kwe KDE, andazi, kodwa eyona nto iqinisekileyo kukuba iprojekthi ngasemva kweyona desktop isetyenzisiweyo kwiLinux ndavula iphepha (Julayi 16) umnxeba leveki.gnome.orgKulindeleke ukuba bapapashe amangeniso veki nganye bethetha ngayo yonke into abayenzileyo kwiintsuku ezisixhenxe ezidlulileyo. Njenge KDE, kodwa ngesakhiwo esahlukileyo.
1 Kule veki kwi-GNOME, utshintsho oluzayo
2 Amanqaku ambalwa, kodwa u-odolwe ngcono
Kule veki kwi-GNOME, utshintsho oluzayo
I-libadwaita ikwenze lula ukubonakala kwamaqhosha ebar yewonga.
Zonke izicelo ze-GNOME Circle (into efana ne-KDE Gear, kodwa ngesoftware yomntu wesithathu) yongezwe kuluhlu olungagqibekanga kwivenkile yesoftware.
Umgqatswa wokuKhululwa we-GNOME 41 ngoku uyafumaneka malunga no-Ubuntu, ayikaqinisekiswa, kodwa ngekhe isetyenziswe kwi-Impish Indri.
I-Déjà Dup ixhaswe ukukhusela i-backups ezicwangcisiweyo ngexesha lokugcina amandla kunye nemowudi yokudlala. Ikwahlengahlengise iphepha layo "lokufikelela elinikezelweyo" iphepha ukuba lihle kakhulu kwaye lixhase indlela emnyama.
IPolari, umxhasi we-IRC, ungene kwi-GNOME Circle.
Inguqulelo yokuqala ezinzileyo yeRelm4, ilayibrari esekwe kwi-gtk4-rs esekwe kwilayibrari ye-GUI, yakhutshwa ngeenjongo zokwenza uphuhliso lwesicelo seGTK4 kwiRust ngokulula nangokuvelisa ngakumbi. Ngokukodwa, iRelm4 ngoku ibonelela ngenkxaso ye-libadwaita, incwadi yabaqalayo epheleleyo, kunye nezinye izinto ezongezelelweyo.
I-Telegrand ngumxhasi weTelegram olungiselelwe i-GNOME, kwaye ukwahlulwa kwemini kuphunyeziwe kwimbali yengxoxo kwaye umthumeli wemiyalezo yokugqibela ethunyelweyo ukongezwa kuluhlu lwengxoxo. Kwelinye icala, umyalezo we-tdlib wesiseko sedatha songezwa esivumela iTelegrand ukuba isetyenziswe kwimowudi engaxhunyiwe kwi-intanethi kwaye ikhawulezise ixesha lokuvula. Okokugqibela, amagama abathumeli afakwe imibala besebenzisa inkqubo efanayo yombala esetyenziswe kwiDesktop yeTelegram kwaye i icon iye yongezwa kwingxoxo eziqhotyoshelweyo.
Inkxaso yeeakhawunti ezininzi ifikile kwiFractal, usetyenziso lwemiyalezo yeMatrix.
Uluhlu lwee Izicelo zeGNOME.
Amanqaku ambalwa, kodwa u-odolwe ngcono
Kule veki kwi-GNOME kwaye Kule veki kwi KDE bonisa ngokugqibeleleyo ukuba zisebenza njani zombini ezi projekthi. Ngelixa i-KDE ipapasha amanqaku amaninzi veki nganye, i-GNOME ipapasha kancinci, kodwa ndicinga ukuba iyabachaza ngcono. Kucacile ukuba uNate Graham akanakho ukucacisa okuninzi kuhlobo ngalunye lotshintsho akhankanya lona, ​​kodwa umsebenzisi oqhelekileyo unokuphoswa ziifoto okanye ividiyo. Uyayongeza xa enakho, kodwa ukuba ebesenzela yonke into, amanqaku aya kuba made kwaye amaphepha aya kuba nzima.
Kule veki kwi-GNOME kufuneka iqhubeke ngokungenammiselo, kwaye ndicinga ukuba iya kukhuthaza abaphuhlisi ukuba baqhubeke nokuphucula ifayile ye- desktop isebenzisa inguqulelo enkulu yeenkqubo ezinjengeBuntu okanye Fedora. I-GNOME ayifuni lutshintsho lungako njenge-KDE 4, eyathi kwiminyaka embalwa eyadlulayo yangazinzanga kangangokuba ndazama ukusebenzisa uKubuntu kwaye, ndithanda into endiyibonileyo, kuye kwafuneka ndiyeke kuba yatshayisa kakhulu. I-GNOME iya kuphucuka ngeli nyathelo, kokubini kuyilo kunye nokusebenza, kodwa iya kuhlala iyinyani kwifilosofi yayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Iidesika » gnome » Kule Veki kwi-GNOME: Abaphuhlisi beDesktop esetyenziswayo
Ucocekile, umdlali weencwadi ezimanyelwayo ofumanekayo kuBuntu